မဟာဗမာ နယ်ချဲ့ လက်နက်ကိုင်သူပုန်ရဲ. – ကရင်သတ်ပွဲ (ကရင်လူမျိုးများ မမေ့သင့်သောသမိုင်း) 91ခုနှစ် ဘိုကလေးအရေးခင်း ဖြစ်ရပ်မှန် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeမဟာဗမာ နယ်ချဲ့ လက်နက်ကိုင်သူပုန်ရဲ. – ကရင်သတ်ပွဲ (ကရင်လူမျိုးများ မမေ့သင့်သောသမိုင်း) 91ခုနှစ် ဘိုကလေးအရေးခင်း ဖြစ်ရပ်မှန်
မဟာဗမာ နယ်ချဲ့ လက်နက်ကိုင်သူပုန်ရဲ. – ကရင်သတ်ပွဲ (ကရင်လူမျိုးများ မမေ့သင့်သောသမိုင်း) 91ခုနှစ် ဘိုကလေးအရေးခင်း ဖြစ်ရပ်မှန်
မဟာဗမာ နယ်ချဲ့ လက်နက်ကိုင်သူပုန်အကြောင်းသိချင်ရင်
1991 တုန်းက ဖြစ်ရပ်အမှန်ပါပဲ …
(ငါက ဗမာကွ ဆိုလဲ ကျော်သွားကြပါ)
ခေတ္တ ကရင်လေး ဖြစ်ပါရစေ….
ကရင်သတ်ပွဲ (ကရင်လူမျိုးများ မမေ့သင့်သောသမိုင်း)
91ခုနှစ် ဘိုကလေးအရေးခင်း ဖြစ်ရပ်မှန်
(ပြည်သူထူထုသိရမည့် သမိုင်းသင်္ခန်းစာအဖြစ် ခုခေတ်တွင်ပင် ပူပူနွေးနွေးဖြစ်ပွားခဲ့သော အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်ပွဲတခု ကိုဖွင့်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်)
၁၉၉၁ ခု အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်တွင် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KNLA) မှ ပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘိုကလေးမြို့ နယ်ရှိ တီတန့် ကျေးရွာ သို့ ရောက်လာသည်။
၀က်စုရဲစခန်းမှအစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့ က မင်္သကာသူ ဦးအားမောင်အားသွားရောက်ဖမ်းဆီးရာတွင် ဦးအားမောင်ထွက်ရာ နောက်မှလိုက်လံပစ်ခတ်သော်လည်းလွတ်မြောက်သွားသည်။
သေနပ်(၈)လက်ကျည်ဆံသေတ္တာ ၃လုံးနှင့်ကျည်ဆံတအိတ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ(၃)ရက်နေ့ တွင် ဘိုကလေးမြို့ နယ် မ၀ကဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူး မြင့်အောင်က စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား (၅၀)နှင့် ကသမျှင်ရွာသို့ ရောက်လာပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများပြုသည်။
ရွာလူကြီးများက သူတို့ မသိရကြောင်းပြောကြသည်။ ကသမျှင်ရွာ ခရစ်ယန်သင်းအုပ်ဆရာ ဆရာအေးရွှေနှင့် ဘုရားကျောင်းအသင်းဝင်များက ဗိုလ်မှူး မြင့်အောင်အဖွဲ့ ကို ထမင်းဟင်းဖြင့်ဧည့်ခံကျွေးမွေးကြသည်။
ထိုအချိန်တွင် ၀က်စုရဲများက လက်နက်သိမ်းဆီးရမိကြောင်းကို ဗိုလ်မှူး မြင့်အောင်အား လာရောက်သတင်းပို့ သည်။ သို့ ဖြစ်၍ဗိုလ်မှူးမြင့်အောင်နှင့်တချို့အဖွဲ့ ဝင်များရှေ့ ကြိုပြန်သွားကြသည်။
စက်လှေနှင့်ပြန်လိုက်လာသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို KNLA ပျောက်ကျားများဟုထင်ရသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တဖွဲ့ က ကသမျှင်ရွာချောင်းကမ်းပါးမှ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်သဖြင့်ရဲ (၁၇)ယောက်သေဆုံးသည်။ စစ်ကူလိုက်လာသည့်စစ်တပ်
အဖွဲ့ ကိုလဲ ကသဘောင်းရွာမှ အမျိုးအမည်မသိတပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့ က ဆီးကြိုတိုက်ခိုက်သဖြင့် စစ်သား(၂)ဦးနှင့် ရဲတစ်ဦးကျဆုံးပြန်သည်။ ထိုပျောက်ကျားအဖွဲ့ စက်လှေဖြင့် ရှောင်ပြေးနေစဉ် ထောင်ပိုင်ချောင်းဝတွင် အသင့်စောင့်နေသော အစိုးရတပ်က ဆီးကြိုတိုက်ခိုက်သဖြင့် တချို့ သေဆုံးကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး တချို့ကန်ခမောက်ကြီးအရပ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြသည်။ အောက်တိုဘာလ(၅)ရက်နေ့ တွင် အစိုးရကလေယဉ်နဲ့ ကန်ခမောက်တရွာလုံးကိုပစ်ခတ်ပြီး မြေပြင်မှလဲ ၀ိုင်းဝန်းသဖြင့် အမည်မသိပျောက်ကျားအားလုံးအဖမ်းခံကြရသည်။ ဖမ်းမိသမျှကို နေရာတွင်ပင် ရိုက်နှက် ညှင်းပမ်းပြီး သတ်ပစ်လိုက်သည်။
အနီးအနာရှိ ကရင်ရွာအားလုံးကိုလဲဝင်ရောက်ပြီး တွေ့ သမျှလူကြီး၊မိန်းမနှင့် ကလေး မကျန်အားလုံးကို မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးနှိတ်စက် သတ်ဖြတ်မှုကြီးစတင်လေတေ့ာသည်။
အောက်တိုဘာလ(၈)ရက်တွင် မော်ကျွန်းဘက်သို့ စက်လှေ (၄)စီး နှင့် တက်လာကြသည့် ပျောက်ကျားစစ်ကြောင်းကို ဘုရားစုရွာအနီးတွင် အစိုးရတပ်က စောင့်တိုက်သည်။ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ မှာလေယဉ်နှင့်လာကြသဖြင့် ခုလိုအချိန်မီစောင့်တိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အရပ်သားတချို့ ကပြောသည်။ အမည်မသိပျောက်ကျား(၃)ဦးကျရန်ရစ်ခဲ့သည်။ အရပ်သားများက ကရင်ပျောက်ကျားလှုံ့ ဆော်ရေးခါင်းဆောင်တဦးဟု ထင်မြင်ခဲ့သော ဆရာအယ်ကြေးဆိုသူ အစိုးရလေယဉ်ပေါ်တက်လိုက်သွားခဲ့သည် ကို လူတချို့မြင်လိုက်သဖြင့် သို့ လော သို့ လောထင်မြင်ချက်ပေးကြသည်။ တိုက်ပွဲပြီးသွားသောအခါ ကျန်ပျောက်ကျားအဖွဲ့ ဝင်များ မြောင်းမြမြို့ နယ် ငပုတော ရွာတွင်စက်လှေငါးစီးဖြင်ရောက်နေသော တခြားပျောက်ကျားစစ်ကြောင်းနှင့် သွားရောက်ပူးပေါင်းသည်။ အုန်းပင်စုရွာအနီးတွင် မြေပြင်မှအစိုးရခြေလျင်တပ်များနှင့် စစ်ရေယဉ်များကအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ချိန်တွင် လေယဉ်ဖြင့်လည်း ဗုံးကျဲသဖြင့် ပျောက်ကျားဘက်က (၄၀)ခန့် သေဆုံးကျကျန်ခဲ့သည်။ အစိုးရတပ်ဘက်က ပျောက်ကျားများထက် ကျဆုံးမှုများပြားသည်ဟု မျင်မြင်သက်သေတချို့ကပြောသည်။
အရပ်သားများနှင့်လွတ်မြောက်လာသူများ၏ပြောကြားချက်အရ ပျောက်ကျားခေါင်းဆောင် အိုင်ဖူးသည် အ၀ိုင်းခံနေရစဉ် ကျန်လူများအားလုံးကိုထွက်ပြေးစေပြီး အစိုးရတပ်ထိုးတက်လာသည့်လမ်းတွင် တဦးတည်းပစ်ခတ်ခုခံရင်းကျဆုံးခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ အိုင်ဖူးသည် ရပ်ရွာအတွင်းစည်းရုံးရေးလုပ်ခဲ့သဖြင့် အရပ်သားတချို့ ကမှတ်မိနေသည်။ ထိုတိုက်ပွဲအပြီးတွင် ကရင်အရပ်သားများကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးခဲ့သူတဦးဖြစ်သည့် ၀ါးဒိုဆိုသူလည်းကိုယ်ရောင်ပျောက်သွားသည်။ ၀ါးဒို သည် အစိုးရစစ်တပ်မှ သပ်လျှိုထောက်လှမ်းရေးတဦးဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး အရပ်သားများကို ထချရန်ပြောင်တလင်းလိုက်ဆွခဲ့ ခြင်းမှာလဲ ထောက်လှန်းရေးနည်းပရိယာယ်အရ ရန်သူ၏လှုပ်ရှားမှုကို မြင်ရအောင် ထောင်ခြောက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတချို့ က ယူဆသည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကရင်များသည်ှဗမာစကားပြောကြသဖြင့်ဝါးဒိုကို ကရင်အမျိုးသားတဦးဟုတ်သည်မ မဟုတ်သည်ကိုလဲ ဘယ်သူမှ တပ်အပ်မသိကြပေ။
အောက်တိုဘာလ(၁၅)ရက် တွင် အထက်ပါကရင်ပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ကရင်ရွာကြီးတရွာဖြစ်သည့် တဲ့တဲ့တူးရွာချောင်းဝသို့ အရောက်တွင် အစိုးရတပ်မှဆီးကြိုတိုက်ခိုက်ပြန်သည်။ (၁၆)ရက်နေ့ တွင် တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်ကိုယ်တိုင် တဲ့တဲ့တူးရွာသို့ ရဟတ်ယဉ်နှင့်ရောက်လာသည်။ ရဟတ်ယဉ်ပေါ်မှ အသံချဲ့စက်ဖြင့် ရာဇသံပေးသည်ကိုရွာသားများကြားခဲ့ရသည်။ ရာဇသံတွင် လက်နက်ချပါက သတ်ပစ် မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများကိုလဲ ထွက်ပြေးသူများကို လိုက်လံစည်းရုံး ပေးကြရန်ကြေညာသည်။
မပြေးဘဲကျန်သောရွာခံသားများကို ၀ါးချွန်များ တုတ်များကိုင်ဆောင်စေပြီးစစ်သားများနှင့်အတူ ထွက်ပြေးသူများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးစေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဖမ်းမိသောသူအားလုံးနှင့်တကွ လိုက်ဖမ်းပေးသူရွာသားအများစုကို ၀ါးချွန်များဖြင့်ထိုး၍သော်၎င်း ၀ါးရင်းတုတ်များဖြင့်ရိုက်နှက် ၍သော်လည်းကောင်းသတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ပျောက်ကျားများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဆိုသော ဦးဂျက်ဆင်
ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အစိုးရတပ်က မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ခြေချနိုင်ရန် ၀င်ရောက်လာသည့်ကေအဲန်အဲလ်အေ မှ အသေခံပျောက်ကျား အားလုံးကိုကျုပင်ခုတ်ကျုငုတ်မကျန်ရှင်းလင်းလိုက်ပြီး နီးစပ်ရာအပြစ်မဲ့ သူတချို့ ကိုလဲသတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့သည်။ အမှန်တွင် ဤမျှနှင့်စစ်တပ်၏တာဝန်ပိုင်းပြီးဆုံးပြီဖြစ်သည်။ သို့ သော်ထိုသို့ မဟုတ်ဘဲ အစိုးရတပ်က ဒေသအတွင်းရှိကရင်လူထုများစွာကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှုများ ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် လူစိတ်ကင်းမဲ့စွာ ဆက်လက်ကျူးလွန်သည်။ ကိုယ်တိုင်တွေ့ ကြုံခဲ့ရပြီး အသက်ရှင်လျှက်ရှိသေးသူတချို့ ၏ ဖွင့်ဆိုချက်တချို့ ကို အောက်တွင်ဆက်လက်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
အောက်တိုဘာလ(၇)ရက်နေ့ တွင် ကသမျှင်ရွာမှ ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာ၊ ရွာလူကြီးများ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းဟောင်းများ လက်ကိုနောက်ပြန်ကြိုးတုတ်၍ စစ်တပ်က လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ပထမပိုင်းတွင် ကျား (၁၉)ယောက်နှင့် မ(၂)ယောက်ဖြစ်ပြီး မရှေးမနှောင်းမှာပင် နောက်ထပ်ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးလာသဖြင့် အချုပ်ခန်းတွင်ပြွတ်ကြတ်သွားသည်။
ကသမျှင်သင်းအုပ်ဆရာ၏ပြောပြချက်မှာ သူ့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာတွင် မ၀ကဥက္ကဌနှင့့််တပ်ဖွဲ့ ကို ထမင်းကျွေးခဲ့ပြီးသတ်ရန်ကြံစည်ခဲ့သည်ဟုစွတ်စွဲသည်။ ရင်ဝကိုဆောင့်ကန်ခံရသဖြင့် အသက်မရှူနိုင်ဘဲ သတိလစ်သွားသည်။ ညသန်းကောင်အချိန်တွင် အချုပ်ခန်းမှဆွဲထုတ်ပြီးအုတ်ခဲချွန်များပေါ် တွင်ဒူးထောက်နေခိုင်းသည်။ ပုဆိုးကိုလဲဆွဲချွတ်ပြီး မီးရှို့ သည်။ ထမင်းကိုမနက်တဆုတ် ညတဆုတ် ရေကိုမနက်တခွက်ညတခွက်တတိုက်သည်။(၂၈)ရက်လုံးလုံး လက်ပြန်ကြိုးတင်းကြပ်စွာတုတ်ခြည်ထားသည်။
ဖမ်းဆီးထားသူများစွာကိုကြိုးတချောင်းနှင့် တွဲခြည်ထားသည်။ အိပ်ပျော်ခါနီးတွင် စစ်သားတချို့ ကလာခေါ်ပြီး ညှင်းဆဲသည်။ နှိတ်စက်နည်းများတွင် လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီး ထုတ်တန်းဆွဲခြင်း၊ ဆေးလိပ်မီးနှင့်တို့ ခြင်း၊ ခေါင်းကိုပလပ်စတစ်ဖြင်ူစွတ်ပြီးရေလောင်းခြင်း၊ ထိုးကျိတ်ကန်ကျောက်ခြင်း၊ အခွန်နှင့်ထိုးခြင်း၊ နားထဲရေလောင်းထည့်ပြီးနရင်းအုပ်ခြင်း၊ ၀ါးဆစ်နှင့်ရိုက်ခြင်း၊ ညိုတန်ကျဉ်းကိုသံလုံးဖြင့်ဖိလှိမ့်ခြင်း၊မျက်နှာနှင့် ခြေဖ၀ါးကိုဓါးနှင့်လှီးခြင်းစသည်တို့ ဖြစ်သည်။ စစ်သားတဦးကသူ့ ခြေဖ၀ါးတွင်မှာခရစ်တော်၏ပုံကို ပြပြီး မင်းတို့ ရှိခိုးတဲ့ဘာရားက ငါ့ခြေဖ၀ါးအောက်မှာဘဲရှိတယ်ဟု ပြောဆိုစော်ကားသည်။
အောင်းကုန်းရွာတွင် (၃၄)ဦး အစိုးရတပ်၏သတ်ဖြတ်မှုကိုခံရသည်။ အောင်းကုန်းရွာတဘက်ကမ်းရှိ ကမာဟောက်တွင် ကိုယ့်တွင်းကိုယ်တူးခိုင်းသည်။ တွင်းဝတွင်ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းပြီး ဘ
က်နက်နှင့်ထိုးခြင်း၊ ၀ါးတုတ်များဖြင့်ရိုက်ခြင်းအပြင် စပါးရိတ် တံစဉ်နှင့် လည်ပင်းလှီးခြင်းများဖြင့်
သတ်ဖြတ်ပြီး တွင်းထဲ ကန်ချလိုက်သည်။ တချို့ ကိုချောင်းထဲပစ်ချလိုက်သည်။အမျိုသမီးတဦး ကိုမှားယွင်းသတ်ဖြတ်မိသည်ဟုဆိုကာဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးမင်းဆိုသူက
ထိုဗိုလ်မှူးမှာ လူစိတ်ကင်းမဲ့သောစစ်တပ်အတွင်းတွင် မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲပါဝင်နေရသူတဦးထဲကဖြစ်သည်။
အခြားအမျိုးသမီး (၂)ဦးကို သစ်ပင်တွင်ဇောက်ထိုးဆွဲ၍ အောက်မှ မီးခိုးတိုက်သတ်သည်။ အမျိုးသမီးတဦးမှ ရာသီသွေးများကျဆင်းလာပြီး သတိမေ့သွားသည်။ ထိုလူသတ်ပွဲတွင်အထက်အမိန့် အရပါဝင်ခဲ့
ရသော ရဲဘော်တချို့ ယနေ့ တိုင် (၂၀၀၆ခုနှစ်) အထိရှိနေသေးသည်။
ဤနေရာတွင် အစီရင်ခံစာ တ၀က်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ရင်နင့်စရာကောင်းသောအဖြစ် အပျက်များ နှင့်ပြည့်နှက်နေသည့်နောက်တ၀က်ကို ယခုကဲ့သို့ ချုပ်နှုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်။
စာရေးသူသည် အရင်ကကြားဖူးခဲ့သည့် ဂျပန်နှင့်ဘီအိုင်အေတပ်တို့ ၏ရက်စက်ကမ်းကြုတ်လူမဆန်မှုကို
မယုံတ၀က် ယုံတ၀က်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင်ပင်ဤသို့ လုပ်နေကြလျှက်ရှိဆဲကို သိရသဖြင့်
ထိုခေတ်က ထိုသို့ လုပ်ခဲ့ကြမည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိဖြစ်ရလေသည်။
ဂျပန်နှင့်ဘီအိုင်အေတပ်များမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ကရင်ရွာများကိုသတ်ဖြတ်ရာတွင် အပြောအများဆုံတခုမှာ ကလေးငယ်များကို မိုးပေါ်မြောက်တင်၍ အောက်မှ ဘက်နက်နှင့်ထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်အမျိုးသားအစွန်းရောက်ဝါဒီတို့ ၏တဘက်သပ်ရက်စက်နည်းမျိုးကို ပုံတူကူးခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်စစ်သားများကိုဖမ်းမိသောအခါ ဂျပန်ကဲ့သို့ ရက်စက်မှုမျိုးကို အဂ်လိပ်များဘက်က ပြုကျင့်သည့်အလေ့များရှိသည်ကိုမတွေ့ ရပါ။ ဆရာစံထကြွစဉ်ကလည်း ဆရာစံနှင့် အဖွဲ့ ကိုသာ ဥပဒေအရအရေးယူ ရုံတင်စစ်ဆေးပြီး ကြိုးဒဏ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ခါ ဆရာစံကျက်စားခဲ့ရာဒေသရှိကျေးရွာသူရွာသားအားလုံးကို အလိုတူအလိုပါအဖြစ် သော်၎င်း ဆိုင်ရာလူထုကိုချိမ်းခြောက် အညွန့် ချိုးရန်သော်လည်းကောင်း ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်းမရှိယုံမက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများကိုပင်မပြုခဲ့ကြပါ။
စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ရာတွင် လူ (၂၀၀)နီးပါး သေကြေခဲ့ပြီး အလောင်းများကိုလဲပြန်မရကြပါပေ။ တလအကြာတွင် အယောက်(၅၀၀)ခန့် ကို အင်းစိန်ထောင်နှင့်မအူပင်ထောင်များသို့ ပို့ သည်။ ထောင်သို့ ပို့ခံရသူများထဲတွင် အစိုးရကျောင်းမှ ကရင်ဆရာ ဆရာမ (၁၆)ဦးပါရှိသည်။ ဆရာမတဦးက သူ့ ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲ ထောင်သို့ ပို့ ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
စည်ကြီးရွာနေ စောချာဘေးကို မသင်္ကာမှုနှင့်ထမ်းခေါ်သွားခြင်းမျှသုဖြစ်သော်လည်း မျက်နှာကိုပိတ်စည်းကာ နှိတ်စက်ပြီးနောက် ဓါးနှင့်ထိုးသတ်လိုက်ပါသည်။ မြပဲခူးရွာသယးစောထူးရှီးမှာ နှိပ်စက်ခံရရင်းသေသွားသည်။
ဆိတ်ကြီးရွာသားဦးရှီးလှမှာမူ ကိုယ့်တွင်းကိုယ်တူးရပြီး ပေါက်တူးနှင့် ပေါက်သတ်ခြင်းခံရသည်။ အောင်ကုန်းရွာခရစ်ယန်သင်းအုပ်ဆရာ လေဟန်ကို သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် ထိတ်တုံးခတ်ပြီး ရေမတိုက် အစားအစာမကြွေးဘဲ နေပူလှမ်းထားခဲ့ပြီး (၃)ရက်အကြာတွင် မချိမဆန့် သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် အဖမ်းခံရချိန်တွင် ဖျားနာနေသည်။ ဒေါင့်ကြီးရွာနေ စောအောင်မြ မှာ ကသမျှင်ရွာတဘက်ကမ်းတွင် ကိုယ့်တွင်းကိုတူးရပြီးနောက် ပေါက်တူးဖြင့်ပေါက်သတ်ခြင်းခံရသည်။ သပြေကုန်းရွာနေ ဦးပန်းမြိုင် က ကရင်ပျောက်ကျားများကိုထမင်းကျွေးခဲ့ဘူးသူအဖြစ် နှိတ်စက်သတ်ဖြတ်ပြီးနောက် သူပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများနှင့်လယ်ထွန်စက်အပြင် အိမ်ကိုပါဖျက်ပြီး စစ်တပ်ကသိမ်းယူသွားခဲ့သည်။ ဘာမှပတ်သက်ခြင်းမရှိသော ကျောင်းဆရာဦးဖိုးလှမှာနှိတ်စက်ပြီး ရေနှစ်သတ်ခြင်းခံရသည်။
ကွင်းကုန်းရွာနေ အတော်အသင့်ချမ်းသာသူနော်စေးဖေါမှာ မျိုးချစ်စိတ်မြင့်မားသူဖြစ်၍ ကရင်ပျောက်ကျားများစက်လှေများဝယ်ယူရာတွင် လိုက်လံပို့ ဆောင်ခဲ့သည့်ပြင် ငွေကြေးလဲထောက်ပံ့ပေးသူတဦးဖြစ်သည်။ တကိုယ်လုံးနာကျင်အောင်ရိုက်နှက်ပြီးမှ ရေနွေးပူနှင့်လောင်း
သတ်ခြင်းခံရသည်။ စည်လေးရွာနေ တာယိုးယိုးနှင့်အဖေါ်(၂)ဦး ၏ခေါင်းကျေမွနေသောအလောင်း၃ လောင်းကိုရွာသားများတူးဖေါ်တွေ့ ရှိသည်။ အောင်ကုန်းရွာမှ လူငယ်(၈)ဦးကိုကြိုးတချောင်းဖြင့်လည်ပင်း တွင်ချည်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ ဆွဲခေါ်သွားသည်။ တယောက်လဲကျသဖြင့်အားလုံးလိုက်လဲကျသည်။ သူတို့ အားလုံးကိုယ့်တွင်းကိုယ်တူးရပြီး ဘက်နက်နှင့်ထိုးသတ်ခြင်းခံရသည်။ လူငယ်လေးတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးဇောက်ထိုးတွဲလောင်းချခါရိုက်နှက်ခါ သေနပ်တွေဘယ်မှာဝှက်ထားသလဲဟုစစ်သည်။ လူငယ်လေးမှာ အဖြစ်အပျက်နှင့်ဘာမှမဆိုင်သူဖြစ်သဖြင့် ဘာမှမဖြေနိုင်သဖြင့် နေ့ညမပြတ်ညှင်းဆဲသည်။ အမေကိုတွေ့ ခွင့်တောင်းသည်ကိုတော့စစ်သား များခွင့်ပြုသည်။ ဘယ်သူမဆို ခုလို အညှင်းဆဲခံရနိုင်ကြောင်းကို အဖမ်းမခံရသော အရပ်သားများသိရှိစေချင်သောသဘောနှင့် တွေ့ ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ မိခင်နှင့်တွေ့ သောအခါ အမေ့မှာရှိတဲ့ ကျွဲနွား လယ်မြေတွေအိမ်င်္တေအကုန်ရောင်းပြီး သူ့ အားသေနပ်ဝယ်ပေးပါရန် ကျနောမခံနိုင်တော့ဘူးဟု အမေ့အားနာကျင် ကျေကွဲစွာပြောသည်။ ထိုသေနပ်ကိုစစ်သားများအားပေးလိုက်လျှင်သူ့ အားဆက်လက်ညှင်းပမ်းမှုမပြုတော့ဟုမျှော်လင့်ချက်ထားရှာသည်။ အမေ့မှာ သားငယ်မကြာမီ ညှင်းဆဲမှုဒဏ်နှင့်အသတ်ခံရတော့မည်ကို သိသဖြင့် ရင်ကွဲခဲ့သည်။
အသက်(၇၀)ကျော်ရှိ အသင်းအုပ်ဆရာတဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး အသင်းသားဘယ်နှဦးရှိလဲဟုမေးသည်။ (၃၀၀)ရှိသည်ဟုဖြေသည်။ ကရင်ပျောက်ကျားမှားအကြောင်းကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးသောအခါ သူမသိကြောင်းပြောသဖြင့် လူ(၃၀၀) မျက်လုံး(၆၀၀) တောင်ရှိပြီး ဘာမှမမြင်ရကောင်းလားဟုဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခါ ၀ိုင်းဝန်းကန်ကျောက်ပြီးခေါင်းကိုလဲသတိမေ့သွားသည် အထိရိုက်နှက်သည်။ မင်းတို့ ဘုရား ယေရှုကို ကုန်းအော်ခေါ်လိုက်အုန်းဟူ၍လဲ ဘာသာရေးစော်ကားသည်။
ထိုသင်းအုပ်ဆရာကိုမူ အသက်ကြီးပြီဖြစ်၍ မသတ်ဘဲထားသည်။
ကရင်ကျေးရွာတိုင်းလိုလို ရွာနှင့်မနီးမဝေးတွင် လူသေအလောင်းများမြှုပ်နှံထားသည်ကို ကျန်ရှိသောရွာသားများကနောက်ပိုင်းတွင်တွေ့ ရှိသည်။ ထိုကလအတွင်းတွင် အစိုးရစာသင်ကျောင်းအားလုံးကို ပိတ်ထားသည်။ ကရင်လူမျိုးဆရာ ဆရာမ အားလုံးကို စစ်ဆေးမှုမရှိဘဲ ထောင်ချခဲ့ပြီး ကရင်မဟုတ်သောတခြားလူမျိုးဆရာဆရာမများကိုမူ ရွှေ့ ပြောင်းခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတချို့ ကိုဖျက်ဆီးဖြိုချပစ်ပြီး အတွင်းမှရှိသမျှပစ္စည်းများကိုယူသွားကြသည်။
တချို့ ဘုရားကျောင်းများကိုစစ်သားများတည်းခိုကြသည်။ ကသမျှင်ရွာမှ ယောကျာင်္းအားလုံးကို ဘုရားကျောင်းထဲတွင် (၂)လချုပ်ထားပြီး မိန်းမများက ထမင်းလာပို့ ပေးရသည်။ လုပ်လက်စလယ်ယာမြေများလဲ ကြည့်ရှုသူမရှိသဖြင့် ပျက်စီးကုန်သည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ မြန်မာစစ်တပ်လူမဆန်စွာကျင့်မှူများသည် မဟာလူမျုးကြီးဝါဒတည်မြဲရေးအတွက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။ ယင်း ပဒေသရာဇ် ဖက်ဆစ် နယ်ချဲ့ ဝါဒီစစ်တပ်ကတိုင်းရင်းသားတို့ အပေါ် နားရွက်မခတ်ရဲအောင် ချိမ်းချောက် ဖိနင်းထားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူလျှက်ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ်များကလဲ အနုနည်းများဖြင့် တိုင်းရင်းသားတို့ အပေါ် အုပ်စီး မျိုးဖြုတ် စာပေဖျောက် သမိုင်းဖျောက် သေးသိမ် မှေးမှိန် စေရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့်လုပ်နေကြသည်ကိုလည်း နေ့ စဉ်တွေ့ နေရသည်။ တိုင်းရင်းသားတို့ ကို သူတို့ ဆိုင်ရာစာပေဘာသာစကားကိုသင်ကြားကြရန် အားပေးကြရမည့်အစား မြန်မာစာတခုတည်းကို ဆထက်တန်ပိုးသင်ယူကြရန် အစီအစဉ်မျိုးစုံဖေါ်ထုတ်လျှက် မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကြီးထွားခိုင်မာရေးကိုသာ လုပ်နေကြသည်မှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှသည်။
အတုအရောင်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ကိုသာ ၀ိုင်းဝန်းနေကြသဖြင့် တိုင်းရင်းသားတိုင်း မျိုးချစ်စိတ်မြင့်မားလျှင်မြင့်မားသလို အနေရအထိုင်ရကြပ်သော တိုင်းပြည်တခုဖြစ်လာရေး သို့ သာဦးတည်နေသည်။ တိုင်းရင်းသားတို့ ကိုကျဉ်းမျောင်းသောလူမျိုးရေးဝါဒီများအဖြစ်သမုတ်လျှက်က မိမိတို့ ကသာလျှင် ကမ်းကုန်အောင်ကျဉ်းမျောင်းနေကြသည်။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးနှင့်တတိုင်းပြည်လုံးကိုဖျက်ဆီးနေသော ဤမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒ ရှိနေသမျှ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပေါ်လာရန် အကြောင်းမရှိသည်ကို စောင့်ကြည့်ကြပါကုန်။
Credit >>> KNU KNLA
← I can’t see any policies and deeds engaged by the military leaders which are actually building the nation – reconciliation, pursuit of peace, ethnic and religious inclusion, reforms, etc.
ဦးကိုနီ​ကို သတ်​တာ နိုင်​ငံ​ရေးအရ သူတို့ ရှုံးတယ်​ →